Umhla My Pet » Yintoni To Wear On Usuku kuqala Zodiac Sign
Yintoni To Wear On Usuku kuqala Zodiac Sign
ukubuyekezwa: Apr. 04 2020 | 3 min ukufunda
Xa usiya ngomhla wokuqala, into yokuqala mhlawumbi ucinge nje kokuba balinqabisa oko, "Ndiza ukunxiba?!"Okanye ubuncinane, ukuba enye yezinto zokuqala ucinga. Ufuna ukuba ndiqhele izinto ozinxibileyo, kodwa ufuna kwakhona ukuqiniseka ukuba anithanga ukucaphukisa umntu uza kuphuma, kwaye zikufumana ube nomtsalane. Fumana utyikitye ngezantsi ezulu zabo ukufumana izimvo ukuba izinto ozinxibileyo eyayiza amehlo abo kuwe maxa onke amaxesha.
Ukuba umhla Taurus i luncedo uphawu emhlabeni, ngoko bona badla bakhetha isinxibo zemveli. Thatha enye indawo yesikhumba ukubonisa, kwaye ugcine ukuphumla zayisithelisa. Owenziwe kufuneka emvelo ekhangela, nezacholo kufuneka izele ngamatye amahle. Lo mqondiso aphendule kakuhle imibala neqhelekileyo indalo, imibala emhlabeni ezifana nemifuno iyathula okanye mdaka. Okukhona ekulula kumhlaba uthixo / uthixokazi, ngcono.
Umhla wakho Gemini yinto yokudlala and fun, ngoko ngesinxibo into cute kunye shonini kancinane. Njengoko uphawu umoya, uthanda ukugcina kunye oko yaye yintoni na. Ukuze babe ubuntu umntwana-ezifana, ngoko ukuze asithobele izinto ezisikhumbuza kubo lokuba amatakane / elivisayo, ezifana iziketi plaid kunye iibhatyi eyunivesithi. Zama enxibe eliqaqambileyo, imibala mnandi ezivuselela engqondweni yabo.
Umhla wakho Umhlaza na umqondiso intuthuzelo, ngoko akuyomfuneko ukuba banxibe nganto kakhulu nomphetho, ukunxiba uyakuphilisa aphezulu kakhulu, okanye ubeke phezu iqhina ukuba uza kuqhubeka ukungqunga nayo. Ukuba bekhululekile ngokupheleleyo kwindlela onxibe, ukuba Wobavusela ngaphesheya kubo. Zama ukuphepha imibala eqaqambileyo, okanye nantoni na leyo yasendle ngokwenene kwaye phandle into yokuba kunokwenzeka ukuba kuzayo.
Umhla wakho Leo ufuna ukuziva ngathi kuba umhla ishushu egumbini, ukuba wonke ubani iliso zabo, ngoko glam phezulu. Bafuna ukhangela ophezulu njengoko unako. Unako kuba border tacky / ingundaba. Ulwaleko kwi anqabileyo – le mqobo ngaphezulu, ngcono. Bayathanda ebomvu kuba itsale ingqalelo, negolide nemfusa kuba nguwe imibala lwasebukhosini.
Umhla wakho Virgo akakukhathalelanga okuninzi mpahla okanye neebhegi okanye nayiphi na ukuba. Bona eyona nto bakhathazeke kukuba unuka okulungileyo, wathabatha ngokucacileyo isiphango kwangaphambili, kwaye ungenayo hairspray kakhulu, iinto zokuzilungisa, sijongeka unodoli. Ucoceko linani elinye lo mqondiso. Gcina elula yakho impahla, emahle,, baze babambelele imibala cala. Bona sele ngokulula ndimangalisiwe, ngoko imibala eqaqambileyo kubenza nixhalele.
Umhla wakho Libra yeyona kusefashonini zonke iimpawu signs, ngoko ke kufuneka ayikhabe i inotshi. Shenxela ezo mpahla kwaye wabeka kunye kupholile, Jonga trendy. Lo mqondiso bulawula ubugcisa, leyo nto iba Isiqhelo kangaka, kwaye alindele ukuba bajonge kunye ezinamagama. Bayathanda iithowuni Likhonkco, izinto ezincedisayo, nezacholo entle, kodwa hayi kakhulu kuyo.
Umhla wakho iScorpio na umqondiso wokuba olawula emnyameni, ukuze nihambe imibala emnyama. Ukuba uyakwazi nibahluba intloko-to-toe abamnyama, Ziphose kuyo. Bayathanda nawe igqunyiweyo kodwa impahla ngokuqinileyo esikhumbuza kubo yobukhoboka (olu phawu imiba yolawulo). Yiya kuba iliso nomsi, sikhumbula ukuba amehlo le window emphefumlweni yaye bafuna ukubona eyakho kakhulu.
Sagittarius isilwanyana sakho abadli, ukuba abe fashion kunye nempahla, kodwa abafuni ukuba khangela okulungileyo. Bayathanda imibala eqaqambileyo nothando impahla okanye izacholo ukuba unalo ibali kulo. Ukuba ninayo xa useluhambeni, okanye oko yaqala ilifa lwakho imeko ethile engaqhelekanga, Yiphose, ube ngumthombo kwincoko umdla. Baya uzakuphela ekufumaneni wena unguye umdla.
Umhla wakho Capricorn yeyona yemveli ngemiqondiso yonke signs, ukuze babambelele nezinxibo zemveli. Manene, ndaxhwitha LBD yakho; ngaba-, ingaxuthi ukuba isuti neqhina. Hlalani kude imibala eqaqambileyo, baze babambelele cala ezimnyama, ngokukodwa na bamnyama. Cinga ngendlela kengoku onxiba ngayo uza zegala yezopolitiko, yaye ndiza kukunika uluvo ezilungileyo bafuna ukuba khangela njani.
Umhla wakho Aquarius yeyona engaqhelekanga zonke iimpawu signs, ngoko khululeka ukudlala Jonga yakho uze uzame into eyahlukileyo. Edayi iinwele zakho blue okanye pink, ngebhongo choisir ukuba ebalekayo amashiya okanye isisu iqhosha, okanye banxibe isacholo soda ibhotile yakho zisebenziseke. Abazikhathaleli nangokuqalisa zangoku, kuphela abo elizayo, ngoko musani kuhamba oko kuyo ngoku.
Umhla wakho Virgo ngoyena uthando, ngoko ukuba siyibonile impahla ukuqweqwe zenoveli romance okanye uthando film, oko kusebenza. Bayathanda ruffles, izicwili engenayo kunye nentshukumo, umtya, kwaye wenze ngokwakho ukuba, kanangcono. Abayi banyamekela baligcine ongathandani nangona, neebhulukhe kunye ihempe nice ukuba zanele. imibala bazithanda kakhulu iipasiteli.